တနေ့ပြီးတနေ့ (၁၁) Day by Day (11) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Literature/Books » တနေ့ပြီးတနေ့ (၁၁) Day by Day (11)	14
တနေ့ပြီးတနေ့ (၁၁) Day by Day (11)
Posted by Ma Ma on Apr 1, 2015 in Literature/Books, My Dear Diary, Think Different | 14 comments
ဧပြီလက ပိတ်ရက်တွေများလို့ အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်ပဲ ကြွေးကျန်မှာစိုးလို့ မေလကို ကြိုရေးမယ်လို့ တွေးမိတယ်။
တနေ့ပြီးတနေ့ ပိုစ့်တွေ စတင်ရေးစဉ်က အကုန်မရေးဖြစ်/နိုင်မှာ စိုးလို့
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းလေးတွေချည်းပဲ ရွေးပြီးရေးခဲ့တာ မေလထဲက ကာတွန်းတွေဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီတော့ မေလအတွက် ရေးစရာနည်းသွားလို့ ဒီပိုစ့်နဲ့တင် အကြွေးရှင်းနိုင်ပါပြီ။ နိုင်သင့်သူ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အလေးထားပြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။
အနိုင်ပေးဖို့အတွက် သင့်တော်သူ မဟုတ်ပဲ အနိုင်ပေးလိုက်ရရင်
မနိုင်၍သည်းခံရခြင်း …… ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ဦးဆောင်နိုင်သူကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးပါ လို့ ထပ်ဆင့်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်…………
စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့သဘောထားကို နားထောင်ချင်ပါတယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အောင်မြင်ချင်ရင် မဖြစ်မနေ ကြိုးစားဖို့ လိုတာပေ့ါ။
ကြိုးစားတဲ့သူအတွက် အောင်မြင်ခြင်းဟာ တနေ့နေ့တော့ ရလာမှာပါ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ချန်နယ်ဆဲဗင်းမှာလာနေတဲ့ The guys view အစီအစဉ်မှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေထဲက တစ်ယောက်က (နာမည်တွေတော့ မသိလို့)
လူတွေနဲ့စကားပြောရမှာ၊ လူရှေ့ထွက်ရမှာ အကြောက်ဆုံးပဲ တဲ့။
အကြောက်ဆုံးအလုပ်ကို ရင်ဆိုင်ပြီး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဘ၀ကို ရွေးချယ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။
အကြောက်ဆုံးအလုပ်ကို ရင်ဆိုင်လိုက်တော့ ကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးပေ့ါ။
Thy guys view အစီအစဉ်မှာ လူငယ်တွေရဲ့ ပြဿ နာတွေ သိလိုတာတွေကို
လူငယ်အချင်းချင်း ပိုပြီးနားလည်မှုရလို့ လူကြီးတွေက ဖြေကြားပေးတာထက်ပိုပြီး အောင်မြင်တယ်။
စိတ်နှလုံးပြည့်ဝကြတဲ့ လူငယ်တွေလို့မြင်မိပြီး သဘောကျနှစ်သက်မိပါတယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
၀မ်းသာတာက ၂၀% ဆိုပါလား။ လောကကြီးထဲမှာ……
ကိုယ့်ဒုက္ခကို သူ့ဒုက္ခလို သဘောထားပြီး
မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်း ရှိသေးတယ်ဆိုတာ
စာရေးသူ မေ့သွားတယ်ထင်တယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
မြန်မာစကားပုံမှာ ဗုံလုံတလှည့် ငါးပျံတလှည့် လို့ ဆိုသလိုမျိုးပေ့ါ။
တရုတ်စကားပုံမှာလည်း ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အားနည်းတယ်၊ ပညာမရှိဘူး၊ ဥစ္စာမရှိဘူး၊ အာဏာမရှိဘူး ဆိုပြီး အထင်သေး နှိမ်ချတာမျိုးတွေ ရှောင်ကြဉ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကို ရစေလိ့ သဘောကျမိတယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အရာတိုင်းကို လက်ခံဖို့ဆိုတာက မလွယ်သလို……
လက်ခံထားတာကို မစွဲဖို့ ဆိုတာကလည်း ခက်ပါ့။
အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်မယ့် သဘောရှိတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ တရုတ်ကားတစ်ခုမှာ……….
အဖိုးဖြစ်သူက မြေးဖြစ်သူကို တောင်တက်လမ်းကိုပြပြီး သွန်သင်ဆုံးမတာက……
ဒီလိုပဲ အမြင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက် တက်လှမ်းရာမှာ အခက်အခဲ အနှောင့်အယှက်ဆိုတာ တွေ့မှာပဲ။
ဘ၀မှာ အခက်အခဲတစ်ခုတွေ့တိုင်း သည်းခံပြီး ရှေ့ကို ခြေတစ်လှမ်း တိုးလိုက်ပါ တဲ့။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
မမှားဖူးရင် သင်ခန်းစာ မရဘူး။
အမှားထဲက သင်ခန်းစာယူလိုက်နိုင်ရင် အမြတ်ထွက်တာပေ့ါ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားချက်က ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ကို နှိုးဆော်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတယ်။ မရသေးတာ မလိုချင်လို့ ဆိုတာကို အဆင့်တက်ပေးထားတာလို့ ထင်မိတယ်။
များသောအားဖြင့် အောင်မြင်တဲ့အခါ မြောက်ကြွနေတတ်ပြီး
လောကဓံကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ကြိုတွေးထားစေချင်တဲ့ စေတနာပေ့ါ။ နောက်တမျိုးတွေးမိတာက ………..
ဘ၀ဆိုတာ အောင်မြင်မှုချည်း ကြုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး
ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေတိုင်းကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေ့ါ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ဒေါသသည် ရူးသွပ်မှုနဲ့ စပြီး နောင်တနှင့် အဆုံးသတ်သည်ဆိုတာကို ထပ်မံသတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်မယ်။
စာပေဗိမ္မာန်စာမူဆုရခဲ့တဲ့ တဒင်္ဂလေးများစွာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို စိုးသူနဲ့ ကျော်သူ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ (ကျော်သူအကယ်ဒမီရခဲ့တယ်ထင်တယ်။) ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား (နာမည်မေ့နေတယ်။) ကို သွားသတိရမိတယ်။
စိတ်ကို မချုပ်တည်းနိုင်တဲ့ တဒင်္ဂလေးကနေ ဘ၀ကို အများကြီး ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာလေး သတိချပ်မိစေချင်တဲ့ စာမို့ အဖိုးတန်လှပါတယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
လိုအပ်တဲ့နေရာကို ဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် နေရာကိုရယူနိုင်တာပေ့ါ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အောင်မြင်ခြင်းအရသာဆိုတာကလည်း ကျရှုံးဖူးမှ ပိုသိနိုင်တာကိုးးးးး xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ခေတ်သစ် ယုန်နဲ့လိပ်ပုံပြင်လည်း ရှိသေးတယ်။ တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာ မဖြစ်မနေ၊ မပြီးမချင်း လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့
ဇွဲရှိဖို့ မတ်စိပေးချင်တာ ထင်ပါရဲ့။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
သံသယကို လက်တွေ့နဲ့ပဲ ဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံတယ်။
ဆက်ဆံရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးတွေမှာ မှားယွင်းရှုပ်ထွေးတတ်လွန်းလို့။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ဒီစာကိုတော့ နားသိပ်မရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဦးဏှောက်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောဖို့တော့ ကြားဖူးတယ်။
လူမိုက်နှလုံးသား နှုတ်ဖျားမှာတည် …………..လို့
ပြောထားတာတွေနဲ့ တသဘောတည်းပဲလို့ ထင်မိတယ်။
ညီညွတ်ခြင်းသည် ခွန်အားဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ်။
ညီညွတ်ခြင်းကို ခွန်အားလို့ဆိုလိုတာက လူအများအတွက်ဖြစ်ပြီး
ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည် ခွန်အား ဆိုတာကတော့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်ကို ဆိုလိုတာလားတော့ မသိနိုင်ဘူး။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
လူအများရဲ့သဘောကို နားလည်နိုင်မှ လူတွေကို ဦးဆောင်နိုင်မယ်လို့ နားလည်သဘောပေါက်မိတယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
တန်ရာတန်ရာဆိုတာ ဒါမျိုးကိုပြောတာထင်တယ်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ကိုယ်ပိုင်အသံထွက်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းဆိုတဲ့ အသိ အပြင်
ပြောရဲဆိုရဲတဲ့သတ္တိ လည်း ရှိဖို့လိုသေးတာ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
လူအများကို အေးချမ်းမှုပေးနိုင်တဲ့ လ နဲ့ တူတဲ့လူ
လူအများကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့ နေ နဲ့ တူတဲ့လူ … မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်
လူအများကို အလင်းကွယ်/အမှောင်ဖုံးစေတဲ့ (ဒုက္ခရောက်စေမယ့်) တိမ် နဲ့ တူတဲ့လူ မဖြစ်အောင်တော့ ကြိုးစားကြအုံးစို့။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ရွာထဲမှာလို စိတ်သဘောထားကြီးကြတဲ့ ရွာသူားတွေကတော့ ငြင်းခုံခြင်း အနုပညာကို ဆင်နွှဲကြသည်ပေ့ါ။ ဒီနေရာမှာ ငြင်းခုံခြင်းကို အတတ်ပညာ လို့လည်း ပြောကြလေရဲ့။ ဤတွင် မေလ ပြီးပါပြီ။
တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲ ဆိုသလို…..
အဲ…. အော်ရီဒူးကာတွန်းပြက္ခဒိန် ဘယ်ပြေးမလဲပေါ့။ About Ma Ma
Wow says: အမြဲတော့ ၀င်ဝင်ကျိပီး ဘာမှ မပြောဖြစ်ပဲ ကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ ပြန်ပြန်ထွက်သွားဒါ.. နှလုံးသားကမခံစားတတ်တဲ့ စကားကို နှုတ်ကမပြောပါနဲ့ဆိုတာ .. ဟိုဝံကျီးတွေပြောတဲ့ ထမင်းတစ်နပ်လျော့စားတို့၊ မီးမလာဖယောင်းတိုင်ထွန်းတို့ အာ့မိုးပေါဒါမဟုတ်ဘူးလားလို့စ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: လူအများကိုရှေ့ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့နေနဲ့တူတဲ့သူကလူတွေကို
Alinn Z says: ကဲ…
စကားလက်ဆုံကျရင်းနဲ့ ငြင်းခုန်ရအောင်… ဖတ်ရှုလေ့လာသွားပါကြောင်းးး
Ma Ei says: အရာရာကို လက်ခံပြီး
ဘာကိုမှ စွဲလန်းမှု မထားနဲ့တဲ့…
ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ ရမှာဟုတ်ဘူးရယ်…
padonmar says: ဒီလကတော့ ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တွေချည်း ရေးသွားသလိုပဲ။
နှလုံးသားက မပါတဲ့ စကားမပြောနဲ့ ဆိုတာကို ခံစားလို့ရတယ်။
အဲသလို စကားမျိုး ပြောခံရဘူးလို့။
တဒင်္ဂလေးများစွာက ဖြစ်တဲ့ ရုပ်ရှင်က ဒိုး မလား။
(တပြည်သူမရွှေထား ကျမှ ရတာ)
pooch says: ပြက္ခဒိန်လေးရပြီမမရေ
မမကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဒီပိုစ့်တွေကြောင့်သာ ဒီိစာသားလေးတွေကို သတိထားမိတာ
ခင်ဇော် says: ၄ ရက်နေ့ရဲ့ စာသားလေးကြောင့် ကိုယ့်ဒုက္ခ ကို ကြားရတာတဲ့သူတွေထဲမှာ
၀မ်းသာတာက ၂၀% ဆိုတာလေး ကြားဖူးတာကြာပြီ
အာ့ကြောင့်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ရင် ကိုယ့်ဒုက္ခတွေကို အတည်ပေါက် ဘယ်သူ့ဆီမှ မညည်းညူဖြစ်တာ ကြာပေါ့။။
ခင်ဇော် says: တချို့ရက်တွေကမပါတာလား ချစ်မ????
Ma Ma says: တနေ့ပြီးတနေ့ (၁) မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းလေးတွေချည်းပဲ ရွေးပြီးရေးခဲ့တုန်းက ပါထားတာတွေမို့ ရက်တွေ ကျော်သွားတာ။
တောတွင်းပျော် says: 24 က
စကားကို ပေါ့ ပျက်ပျက်မပြောပါနဲ့ ။
ဟန်ဆောင်ဟန်လုပ် မပြောပါနဲ့ ။
တကယ့် ပကတိစိတ်ရင်းနဲ့ပြောဆိုပါ လို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်လား။
Ma Ma says: နှလုံးသားက မခံစားတဲ့ စကားကို နှုတ်ကမပြောပါနဲ့လို့ဆိုတာကို
ပကတိစိတ်ရင်းနဲ့ပြောဆိုပါ လို့ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ပေးတာကို သဘောကျသွားပြီ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောတွင်းပျော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မျက်လုံး နဲ့ ဘုကြည့်ကြည့် ပလိုက်ဖို့ကို lol:-)))) joking နော်:-))
မြစပဲရိုး says: . မေ(၁)
. ဆြာအော် က အကြားအမြင် ရနေသကိုး။ မေဝယ်သာ တို့ ပြိုင်ပွဲ အတွက် ကြိုပြီး သတိပေးထားတယ်။
သရုပ်ဖော်ပုံ က အတော် ရသမြောက်ပါပေတယ်။
ဒီ % တွေ နဲ့ ပြောတော့ ဘိုလို နဲ့ ဘူသူ တွေကို လုပ်ထားတာလဲ မသိ
မနာဘူးရင် သတ္တိမရှိ ဆိုတော့
နာလိုက် ရင်လဲ ကြောက်သွားတတ်ပါတယ်။
. နောက်မှာနေရင်လဲ နဲနဲ ပိုမြင့် ပြီး နေသင့်သလားဘဲ။ မဟုတ်ရင် ဘိုလို မြင်နိုင်ပါ့မလဲ။
. မြန်မာပြည်မှာတော့ ပူလွန်းလို့ တိမ် လိုနေတာထင်ရဲ့။
သများတို့က စကားလက်စုံ ကျရင်း ငြင်းခုံကြတာပါ လေ။ (ဆက်ဆက် ပြောသလို)
Ma Ma says: နာလိုက်ရင် ကြောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးကလည်း ဟုတ်ပ့ါ။
ပဏ္ဍိတာရာမဆရာတော်ကြီးကတော့ အစုရှိရင် အမှုရှိမှာပဲ။
အမှုကနေ အဖုမဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ သြ၀ါဒပေးဖူးတယ်။